HomeAfricaNigeria : Qarax Gilgilay Goob Koobka Aduunka Lagu Daawanayay Tirada Dhimashada Oo Kor U Sii Socota
Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha wadanka Nigeria, ku dhawaad 15 qof ayaa ku dhimatay 26 kale oo 15 kamid ah xaaladoodu hallis ku jirtaana wey ku dhaawacmeen , kadib markii qarax xoogani uu gil-gilay xarun lagu daawanayay ciyaartii xallay ee Brazil iyo Mexico oo 0-0 ka ku dhamaatay.
Wakaaladaha wararka ayaa ku soo waramayay in is miidaamintan dadka badan ku naf waayeen loo adeegsaday gaadiidka dadweynaha ee Bajaajta loo yaqaano oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la hor dhigay goob ay isugu soo ururiyeen dadku si ay ciyaaraha koobka aduunka uga daawadaan oo ku taala magaalada Damaturu, ee caasimada gobolka.
Dadkii ka badbaaday ayaa lagu dawaynayaa cusbitaalka Sani Abacha Specialists Hospital ee gudaha magaalada Damaturu iyadoo ciidamada amaankuna ku daba jiraan cidii ka dambeysay falkaasi.
Dhawaan ayay kooxda Boko Haram ka mamnuucday deegaanada ay gacanta ku hayso , goobaha lagu daawado ciyaaraha koobka aduunka, haddii kale ay weerari doonaan oo ay waxyeelo soo gaadhi doonto cidii lagu arko.
Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkan , waxaase loo badinayaa oo ay dawlada Nigeria sheegaysaa in Boko Haram cid aan ahayni falkaasi ku kicin , Boko Haram0na wax war ah may soo saarin.
Ciyaaryahanada Somaliland Oo Cirka Kala Soo Deggay Callanka Somaliland – Sawiro
Kooxda Middlesbrough Oo Sannado Kadib U Soo Dalacday Horyaalka Premier League
07/05/2016 Samatar Mohamed